Fikambanana Skoto eto amin' ny Fiangonana Loterana Malagasy - Wikipedia
Fikambanana Skoto eto amin' ny Fiangonana Loterana Malagasy
(tonga teto avy amin'ny Fikambanana Skoto eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy)
Ny Fikambanana Skoto eto amin' ny Fiangonana Loterana Malagasy (FS.FLM) dia sampana ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) izay misahana ny skotisma ao amin' io fiangonana io ka mitambatra ao ny Tily sy ny Mpanazava. Miandraikitra ny fomba fanabeazana ny zaza sy ny tanora araka ny fomban'ny skotisma izay mikendry ny haha olom-banona amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanaovana asa soa ny fikambanana nefa tsy latsa-danja ny fitoriana ny Filazantsara sy ny fampianarana ny Foto-pinoan'ny Fiangonana Loterana Malagasy.
1 Fielezan' ny fikambanana
Fielezan' ny fikambananaHanova
Amin' ny maha sampam-pikambanana ao amin’ny FLM azy dia manaiky sy manaja ny rafitra sy ny fandaminana ary ny Lalampanorenana mifehy ny FLM ny FS.FLM. Synodam-paritany miisa 22 manerana ny Nosy ny FS.FLM ary misy any Eoropa koa amin'ny alalan'ny Synodam-Paritany Fiangonana Loterana Malagasy Eoropa (SP FLME) koa.
Fiombonana amin'ny fikambanana hafaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fikambanana_Skoto_eto_amin%27_ny_Fiangonana_Loterana_Malagasy&oldid=1039641"
Dernière modification le 5 Novambra 2021, à 10:45
Voaova farany tamin'ny 5 Novambra 2021 amin'ny 10:45 ity pejy ity.